अण्ड’कोषमा हा’नेर प्रहरीलाई बेहोस बनाएको कसैले किन देखेन ? : एसपी खडका – Ktm Dainik
अण्ड’कोषमा हा’नेर प्रहरीलाई बेहोस बनाएको कसैले किन देखेन ? : एसपी खडका - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
अण्ड’कोषमा हा’नेर प्रहरीलाई बेहोस बनाएको कसैले किन देखेन ? : एसपी खडका
रौतहट । लकडाउन उल्ल’घन गरी प्रहरीलाई जिस्काउने समुहलाई शान्त पार्न रौतहटको गौरमा समान्य झडप भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट गौरले जनाएको छ ।
बाहिर बसेको व्यक्तिलाई भित्र जाउ भनेर समझाउन खोज्दा प्रहरी माथि नै आ’क्रमण भएपछि रौतहट प्रहरीले गौरमा बल प्रयोग गरेको प्रहरी उपरिक्षक रविराज खडकाले बताएका छन् ।
उपरिक्षक खडकाका अनुसार गस्तीमा गएको बेला लकडाउन उल्लंघन गर्नेहरू संग कुरा गर्दा आक्रमक भएर प्रहरी हवल्दार महेश खड्का को अण्डकोषमा हानेर घाइते बनाएपछि प्रहरीले आत्मरक्षाको लागि चाहदा नचाहदै बल प्रयोग गरेको हो । घाइते हवल्दार खड्का वेहोस भएपछि घटनास्थलमा थप टोली पठाइ घाइतेको उदार गर्दा बखत स्थानीयहरु संग झडप भएको उपरिक्षक खडकाको भनाई छ ।
बाटोमा गस्ती गएको बेला आठ-नौं जना फेला पारे र सम्झाउने क्रममा उनिहरूले प्रहरीमाथि जाइलागे घटनालाई बढन नदिन चार जनालाई नियन्त्रमा लिनु परेको खडकाले खुलासा गरे ।
प्रहरी हवल्दारको अण्डकोषमा ढुङ्गाले लागेपछि ती बेहोस भएका थिए र अहिले पनि जिल्ला अस्पतालमा उपचाररत छन, उनले भने । अस्पताल भर्ना भएपछि पनि उनि २—३ घण्टा पछि मात्रै होसमा आएका थिए ।
ती हवल्दारको तिघ्रामा पनि चो’ट लागेको एसपी खड्काले बताए । आफ्नो साथीलाई त्यसरी ढ’ल्ने गरी हा’नेपछि अरूले दुईचार ला’ठी त हा’न्ने नै भयो, उनले भने । अर्को तर्फ यस घट’नामा प्रहरी कै गल्ती रहेको प्रत्यक्षदर्शीले दा’बी गरेको छ । घर अगाडि फोनमा कुरा गरिरहेको व्यक्तिलाई प्रहरीले अचा’नक पि’ट्न’ थालेपछि उसको बचाउ दुई चार जना आएको र प्रहरी संग झडप हुन थालेको बताए ।
झडप हुँदै गर्दा प्रहरीले महिला सहित केही पुरुषलाई निर्मम तरिहाँ तीन—चार जना प्रहरीले एक जनालाई कु’ट’पि’ट गरेको देखिएको छ।
उक्त भिडिओमा एक प्रहरी हव’ल्दार पनि ढ’लेका छन् । सोही घा’इते प्रहरी हव’ल्दार खङको उपचार जिल्ला अस्पताल गौरमा भइरहेको छ । प्रहरीले गौर कारागारका जे’लर शम्भु यादवका छोरा गौर नपा ३ का २२ वर्षीय विवेक यादव, त्यहीका २६ वर्षीय राहुल यादव, २९ वर्षीय राजीव यादव र ३० वर्षीय अभिषेक यादवलाई प्रहरीले निय’न्त्रणमा लिएको छ ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: शनिवार, वैशाख ६ २०७७ १९:५०:३६